UKUSHINTSHA KWAMAHHALA KUYO YONKE IMikhiqizo ye-BUSHNELL
Umlando wokuthuthukisa amabhizinisi
Uhlobo lweMelika hose clamp
Uhlobo lwaseBrithani i-hose clamp
Uhlobo lwe-Germany uhlobo lwe-hose clamp
Imikhiqizo enikeza izidingo zempilo zabantu. Ngokusho kwe-WHO, le mikhiqizo kufanele itholakale "ngaso sonke isikhathi, ngamanani anele, kumafomu womthamo ofanele, ngekhwalithi eqinisekisiwe nolwazi olufanele, futhi ngentengo umuntu nomphakathi abangakwazi ukuyikhokhela".
I-8mm isethi yaseMelika
T-bolt nge-clamp yasentwasahlobo
10mm uhlobo lwe-hose clmp yaseMelika
Umkhiqizo usebenzisa ibhande lensimbi ngokusebenzisa umgodi ukwenza izikulufu zalo zibambe ngokuqinile ibhande lensimbi.
Kulula ukuyisebenzisa, ingasikwa nganoma iyiphi ubude.
I-12.7mm Isethi yaseMelika
Ukufakwa kwamapayipi kungayalwa ngokusho kwemidwebo yamakhasimende.
Izingxenye ezahlukahlukene zokunyathela zingayalwa ngokuya ngemidwebo yamakhasimende.
Le khampasi inamabhendi amabili we-20mm no-32mm.Kukhona konke okwenziwe ngogesi wensimbi nazo zonke izinto ezingama-304.
Uhlobo lwaseBrithani i-hose clamp nge-welding
Ngaphansi kwezindlu zohlobo lwe-hose clamp yaseBrithani nge-welding kuyashisa.
I-V-band clamp yenziwa nge-fasteners ekhethekile yensimbi, ukumelana okuhle kokugqwala. Lesi sikhonkwane sisetshenziselwa ikakhulukazi ukufakelwa imisebe, ukufiphala kosayizi abahlukahlukene ngeke sisebenzise i-groove efanayo, noma ukuvuza kuzovela, ngakho-ke uphenyo kudingeka lunikeze imidwebo ye-flange noma ye-groove.
Kusetshenziselwa ukuxhuma ukuphuma kwe-turbocharger nepayipi lezimoto. Kungavimba i-supercharger ukuthi ibambe ngokweqile futhi ukudlidliza kulinyazwe nengcindezelo enkulu kakhulu.
Unampiko we-hose non-polar we-non-polar
Umkhiqizo we-hose clamp we-non-polar hose clamp ungokuqukethwe okungama-304 kuphela, okunikezela ukumelana okungcono kokugqwala, isisindo esikhanyayo kanye nokufakwa okulula.
Ngaphambi kokuthi isigcawu esakhiwe njengo-U sibuthelwe epuletini yokufaka insimbi, ukuze kutholakale kangcono ukuqondiswa kwesigcawu, kunconywa ukuthi umaka indawo yokulungisa kuqala, bese uthambisa ukunamathisela bese ufaka ingxenye engezansi yomzimba wepayipi, bese ubeka kwi-tube, ubeke enye ingxenye yesigaxa se-tube nesembozo, bese uqinisa ngezikulufo. Khumbula ukukhipha ngokuqondile ipuleti elingaphansi lekhampasi yepayipi.
Umhlangano ogoqiwe, ujantshi wesikhombisi ungashiswa ngogesi esisekelweni, noma uhlanganiswe ngezikulufo.
Okokuqala faka umzimba wepayipi elingaphezulu nelingezansi kwesigamu se-clamp, faka ipayipi ukuze lilungiswe, bese ubeka ingxenye engenhla yephafu yomzimba wepayipi, lungisa ngezikulufo, ngokusebenzisa ikhava yokuyivimba ukuze ivikeleke.
I-T-bolt ene-clamp yasentwasahlobo ingeza iziphethu kuma-T-bolt clamp ejwayelekile ukuhlalisa ukuhluka okukukhulu okuhlanganayo, kunikeza umfutho wokuqina we-seal nokusebenza okuthembekile kophawu.